Monroe, LA • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Jereo ny tolotra ataonay any bodyrub any Monroe, LA.
Monroe dia tanàna fahavalo lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'i Louisiana any Etazonia. Toerana paroasy ao amin'ny Paroasy Ouachita izy io. Tamin'ny fanisana ofisialy tamin'ny taona 2010, dia nisy mponina 48,815 i Monroe. Hizaha ny tolotray ao bodyrub any Monroe, LA.